Pallo Jordan. U-Pallo Zweledinga Jordan wazalwa nge-22 kaMey
Rebecca walo omana
ⓘ Pallo Jordan. U-Pallo Zweledinga Jordan wazalwa nge-22 kaMeyi ngo-1942 e-B Indawo, e-Kroonstad, e-Orange Free State. Utata wakhe, uGqr Archibald Campbell Jordan ..
ⓘ Pallo Jordan
U-Pallo Zweledinga Jordan wazalwa nge-22 kaMeyi ngo-1942 e-B Indawo, e-Kroonstad, e-Orange Free State. Utata wakhe, uGqr Archibald Campbell Jordan, wayengumntu wasenoveli, eyunivesithi kunye nezemfundo kwaye umama wakhe, uGqirha Priscilla Phyllis Jordan, wayengutitshala, umphandi kunye nomhlohli. Bobabini abazali bakhe babengamalungu asebenzayo e-Un-European Unity Movement. Usapho lakwaJordane lwalupolitika kakhulu kwaye ulandela emanyathelweni abo. Waqala eneminyaka esixhenxe ngokuthengisa iikopi zeTorch, iphephandaba eliveliswa yi-NEUM. Wayengumfundi okhutheleyo. Ukugqiba kwakhe ukufunda, waya kwiiyunivesithi ezahlukeneyo eMzantsi Afrika, eMelika naseMelika. Walishiya ilizwe ngo-1962 esiya kufunda kwiDyunivesithi yaseWisconsin e-U.S. Uye wafumana izidanga ezininzi kubandakanya nesidanga sokuthweswa isidanga kwisikolo seLondon Economics.
UJordani wabhala amanqaku amaninzi abalulekileyo. Umgangatho womsebenzi wakhe wophando ubonakaliswa kumaphepha akhe apapashiweyo. Oku kubandakanya, phakathi kwabanye, Ukuphengululwa kukaMoses Kotane: Uhlaziyo lwase-Afrika 1974; Ukuvukelwa kweSoweto: Uhlalutyo 1976 kunye neAfrican Petit Bourgeoisie: Uhlolisiso lwe-NAFCOC 1984.Phakathi kowe-1985 nokubuyela kwakhe eMzantsi Afrika phakathi konyaka we-1990, uJordani wakhokela iqela labaphandi be-ANC kunye nabaphengululi bamazwe aphesheya iinkomfa kunye neesemina eZimbabwe, eTanzania, e-USA, eBritane nakwi-USSR ngelo xesha. Ngo-1985, wanyulwa ukuba azokusebenza kwiKomiti yokuLungiselela yeSizwe ye-ANC, eyayilungiselela inkomfa yayo enkulu yomgaqo-nkqubo e-Kwabe, eBotswana. Kule nkomfa uJordan wanyulwa kwiKomiti eLawulayo ye-ANC. Ukusukela ngo-1985 ukuya kowe-1989 wasebenza kwiKomiti yesiCwangciso se-NEC kunye neeKomiti zobuGcisa njengeConveno.
Iphepha elinomgaqo-nkqubo we-Afrika eseMazantsi e-Soviet Union-eneSpecial Reference eMzantsi Afrika: Amanye amaNqaku ka-1990 aphawula ukuhamba okuhlaziyayo komfundi we-ANC kuhlolisiso lwayo olunobuzaza lomgaqo-nkqubo waseSoviet kwicala lasekhohlo. Ngo-1990 wangena kwingxoxo-mpikiswano ende malungaIphepha elinomgaqo-nkqubo we-Afrika eseMazantsi e-Soviet Union-eneSpecial Reference eMzantsi Afrika: Amanye amaNqaku ka-1990 aphawula ukuhamba okuhlaziyayo komfundi we-ANC kuhlolisiso lwayo olunobuzaza lomgaqo-nkqubo waseSoviet kwicala lasekhohlo. Ngo-1990 wangena kwingxoxo-mpikiswano ende malungaIsimo seSoviet Union ngusihlalo weQela lamaKomanisi oMzantsi Afrika, uJoe Slovo, kwinqaku elinomxholo othi The Callen of Conscience kwi-SACP - Uhlalutyo olugqibeleleyo lweSlovo Ngaba ubuSoshiyali busilele? Ukubonakalisa ukwahluka kwezimvo kulungelelwaniso kathathu.Emva kwexesha wathatha umba kunye neSlovo kwakhona kwicala lesikhokelo senkqubo yothethathethwano ngo-1993. Emva kwesibhengezo esingalindelekanga nguMongameli welizwe u-F.W. de Klerk wokukhulula i-ANC kunye neminye imibutho yenkululeko, uJordani wabuyela elizweni ngo-Juni ka-1990.Ngo-1991, wakwazi ukugcina isikhundla sakhe se-NEC kwiNkomfa yeSizwe yokuqala yokubonisana kwi-ANC kweli lizwe kwiminyaka engamashumi amathathu. Waba ngumntu owaziwayo kumabonwakude wase Mzantsi-Afrika njengesithethi se-ANC kwezona zithethi zaphambili nangaphakathi kunyulo luka-1994.
Emva konyulo lokuqala lwedemokhrasi eMzantsi Afrika ngo-Epreli 1994, iJordani yafungiswa njengeLungu lePalamente kunye noMphathiswa weZithuba, uNxibelelwano kunye nokusasazwa koRhulumente boManyano kuZwelonke ngomhla we-9 kaMeyi.Usebenze kwiiKomiti ezimbini zeKhabhinethi, ezizezi, ezoqoqosho kunye nezentlalo kunye nemicimbi yezolawulo.Ngo-Epreli ka-1996, wathatyathwa nguJay Naidoo njengo-Mphathiswa Wezithuba, Ezonxibelelwano kunye Nosasazo emva kokuvuselela ikhabhathi. Utyunjwe kwisikhundla sekhabinet ngo-Meyi ka-1996, njengo-Mphathiswa Wezemicimbi Yendalo Engqongileyo Nezokhenketho de wapheliswa ngo-1999 eselisebenzisile ixesha lakhe njengomphathiswa.Ukusukela ngo-1999 ukuya ku-2004, ebesebenza njengo-Sihlalo weKomiti yezeMicimbi yezaNgaphandle kwiNdibano yesiZwe. Emva konyulo lukaZwelonke lowama-2004, uJordani wonyulwa njengo-Mphathiswa wezobuGcisa neNkcubeko nguMongameli uThabo Mbeki, isithuba awasibambayo ukusukela ngo-Epreli 2004 ukuya kuMeyi ka-2009.
1994 2003 Isikhathi: 1994 1996 Emva kwa Position established uLandelwa Pallo Jordan Derek Hanekom Ukwazisa Ubezalwa Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela 26
Wikipedia: Pallo Jordan